Ireo toetra mampiavaka ny Mpino
Filipiana 2:12-18 "12 Koa amin’izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasà amin’ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. 13 Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. 14 Ataovy ny zavatra rehetra amin’ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana, 15 mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka hianareo, dia zanak’Andriamanitra tsy manana adidy eo amin’ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin’izao tontolo izao, 16 mitana ny tenin’ny fiainana, mba hisy ho reharehako amin’ny andron’i Kristy, ka tsy ho nihazakazaka foana aho na nisasatra foana. 17 Eny, na dia haidina ho fanatitra aidina eo amin’ny fanatitra sy fisoronan’ ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. 18 Ary aoka izany no hampifaly anareo koa, ary miaraha mifaly amiko."
Matahotra an’Andriamanitra (12-13). Antsoina hatahotra an’Andriamanitra ny mpino tao Filipia. Tsy manatrika azy ireo intsony mantsy izao i Paoly nefa dia mangataka ny hankatoavany azy hatrany. Koa tsy mijoro noho ny hena-maso olona ny mpino, fa mijoro tsara hatrany noho ny amin’ny Tompo. Raha tsy izany dia tonga mpihatsaravelatsihy izy. Fantatry ny mpino fa mahita azy hatrany Andriamanitra satria efa ao anatiny Izy ka miasa hahatanterahana ny sitrapony. Miasa amin’ny fahamarinana (14-16a). Araka izany ny mpino dia tena miasa amin’ny fankatoavana an’Andriamanitra ka tsy mimonomonona na misalasala intsony amin’izay tokony hataony. Tsy hanan-tsiny amin’izay hataony izy ka tonga mamirapiratra toy ny kintana fa tsy hitovy amin’izao tontolo izao antsoina eto hoe “olo-meloka sady maditra”. Sahy mijoro vavolombelona ny mino ka miezaka mizara ny Filazantsara na “Ilay teny manome fiainana” ho an’ny manodidina azy.
Mikatsaka ny fandrosoan’ny hafa (16b-18). Nambaran’i Paoly fa hahafaly sady hampirehareha azy eo anatrehan’ny Tompo ny fandrosoan’ireto kristiana tao Filipy ara- panahy. Izany tokoa ny mpino, tsy mitady izay hampandroso ny tenany ihany fa mitady izay hahafaly ny namany amin’izay hahasoa sy hampandroso azy kosa. (Romana 15:12). Hafa kely sady maharitra ho enti-miandry ny fahafatesana aza io fifaliana nahavita asa tsara sy famonjena ny hafa io. Izany no nahatonga ny Apostoly Paoly feno fifaliana hatrany, na dia efa nandindona azy aza ny hanaovana azy ho faty martiora.
Fampaherezana: Mahereza fa ny Tompo efa nanome toky fa hataony miavaka tokoa ny manompo Azy.